Ukuze ugweme amaphutha, ephendula umbuzo: "Ngubani lo umfowabo Thor," kumelwe ukhumbule kela onkulunkulu amaNorseman izinganekwane. Into Senior ne ebaluleke kakhulu sasibhekwa njengophawu lokuthi umuntu onamandla, ngaphandle-ke wakhumbuza onkulunkulu nambili okubaluleke nakakhulu, phakathi lapho basho futhi Thor futhi Loki.
Gromovik futhi ukuxoshwa emsebenzini--zip Mollnir
Ngo izinganekwane, Thor kwaba unkulunkulu wokuduma kanye neziphepho. INdodana unkulunkulu ophakeme Odin ukuthi behlome ngemibese empini-ngembazo-zip, ngakho ngokuhamba kwesikhathi isibe yangempela isiphepho imidondoshiya. Wayethanda ukuya siyithole lonke ibutho kanye kwadingeka zezifiso ezinganeliseki. Hammer Mollnir kokuzihlanganisa ke dwarfs (dwarfs abazalwane), sasibhekwa njengophawu olumelela le mabutho abhubhisayo futhi yokudala, umthombo inhlanhla nenzalo. Isikhali kwaba Umgadli omkhulu, isibambo esifushane futhi njalo hit ilungelo on target.
Fire unkulunkulu Loki
Loki, umzalwane Thor sika, ngaso sonke isikhathi sihambisana naye ohambweni lwakhe, ndawonye baye bahamba nge Kusaphazwa adventure. Futhi cishe kuzo zonke izimo kuba ukuba nezeluleko ezinhle, zobuqili dexterity Loki yasiza abafowethu abaningi ukuba benqoba ubunzima. Ubufakazi esiphawulekayo kule singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela umlando okuthumba isando villain - nesibuko giant. Njengoba isihlengo ayifunayo yena nonkulunkulukazi wenzalo Freyja ukuba abe umkakhe. Loki kuyisinqumo esiyingqayizivele, yena uncenga Thor egqoke njengoba owesifazane, ukuya abathumbi. Thor abavumela futhi ndawonye baya umkhwenyana-isela. Uma Bamba bajabula wabanika isando, Thor beat umfo abampofu, ngakho sizama ukubuyisa sigqoka yayo wayephila e zabesifazane izingubo idumela. Ngemva indaba enjalo Akunzima khumbula, njengoba babeyibiza kanjalo le umfowabo Thor - Umlumbi Loki.
Kusukela izinganekwane ebhayisikobho
Akumangazi ukuthi namaqhawe elikhanyayo futhi onekhono enjalo kancane kancane uguqulwe ube cinema kanye izithombe. Amafilimu lapho zivela njengoba abalingiswa abasemqoka, noma anesikhundla yesibili, kube kuningi. Futhi igama ububanzi izilaleli mzalwane owaziwa baba vu yasendlini iTorah (eponym), enesandla amafilimu ezilandelayo:
Uchungechunge 2011 "Thor futhi Loki: Igazi Abafowethu". Ngokwale ndaba, ithumba amandla Asgard, Loki, u-Odin futhi Thor chaining kuye ngamaketanga, uwisa kubo etilongweni. Ngisesekhaya ekwazile ukucasula umzalwane othandekayo uSeti ubuhle. Ezweni dlova Kumiswa, kodwa lo mbusi uyathakatha-umboni Karnilla futhi ubikezela ukuwa of Loki.
"Thor" ngo-2011 - fantastic isinyathelo movie kuqondiswe yi K. Branagh, ogxile igama elifanayo amahlaya Marvel Comics. Kulesi movie, Thor bezikhukhumeza bese nabazidlayo, kepha adingiswe Asgard Earth. Lapha ngephutha ihlangabezana owesifazane omuhle isazi sezindikimba ezisemkhathini Dzheyn Foster, olungena. Manje kufanele ayeke umfowabo, ubani uya abuse yedwa Asgard.
"Thor 2: The embusweni wobumnyama wakusa" - i amaqhawe ashisa izikhotha amandla. Le ncwadi fantasy yamahlaya iqukethe indaba lapho Thor esinamandla nangengalo Loki ngizolwa kanye uhlanga lasendulo alien, okuyinto iholwa villain Malekith.
"The Avengers" ngo-2012. Le filimu kuyinto unqambothi ukukhanya ashisa izikhotha, esiqintini okuyinto ukubeka indaba efanayo Loki - bezikhukhumeza bese duplicitous. Lesi sikhathi wanquma ukuthatha Earth, kanye iwuhlasele akuyona kuphela Thor ezihloniphekayo, kodwa futhi iqembu ompetha: Tony Stark, eyaziwa ngokuthi Iron Man, zineminyaka Hulk, Hawkeye abanesibindi, kunganakekile futhi iheha kakhulu Black Widow, abanesibindi futhi uyisidala iqonde uCaptain Melika.
Ngemva kokubuka le filimu yobuciko Akasekho lapho kudingeka ufunde indlela igama umfowabo Thor, sibonga umbala igama onekhono womlingiswa uzobe lihlehlisiwe inkumbulo umbukeli ngamunye.
Villain Loki kuyinto kangaka uyakuthanda izethameli, abalandeli ucele Marvel Studios ukususa sobude umnyakazo isithombe mayelana lo nkulunkulu, futhi okungcono T. Hiddleston in the indima abaholayo. Okwamanje, omunye abalandeli idale ifilimu "Umfowenu Loki sika Thor," esiqintini okuyinto igxile kuphela ngabanye umlilo unkulunkulu, ubuhlobo bakhe noyise baba, umzalwane nezinye izinhlamvu. Material wonke amabhayisikobho Marvel, noma lapho kukhona Ukhulumé Loki. Umbhali isusiwe ngamabomu ezinye izigcawu isenzo nokwakha indaba ngokunengqondo ezihlobene, kodwa wanezela ukuncishiselwa izigcawu abasebenzi ambalwa akufakiwe izinguqulo ezisemthethweni amafilimu. In an icala ngokwedlulele, umbukeli engazazi umlando lo nkulunkulukazi, lokhu uyakwazi ngempela igama umfowabo Thor.
Luc Besson (Luc Besson): Filmography, biography kanye amabhayisikobho engcono umqondisi
Izindlela ezinhlanu zemvelo ukwandisa usayizi webele
"Sakaza Away" movie. Umlingisi Tom Hanks.
Imbali lesikhumba. Master-class ekwenzeni
Amahansi landizela ephusheni? Dream ncwadi uzokutshela ukuthi bafuna kuwe
Kanjani ukuze ulolonge ngayinyomfoza ngayiphosa lesikhumba jacket, uyibuyisele lemukelekako